Chii Chinofanira Kuve Chekutya Kana Bots Inopinda Kumuviri Wako? - Semalt Expert Anopa Mhinduro
Botnets anozivikanwa seti robot networks. Iko chaizvoizvo inhare yakawanda yekombiyuta uye mafoni anotengesa ane utachiona kana hutachiona. Hackers kudzora iyi malware uye inowanzoita mabasa akasiyana-siyana. Ava vanoseka kana kuti spammers vanowanzoonekwa semabhazi. Mushonga mumwe nomumwe ane utachiona unotungamirirwa uye unoshandiswa nebhoi chaiyo, uye anorwisa anorayira makombiyuta paanoona mabhota ake uye anoita zvinoratidzirwa zviito zvekuita.
Chiyero chebhenetsiti chinoita kuti vanorwisa vatange kuita zviito zvikuru uye zviduku zvisingakwanisi kuita nematareji kana mavhairusi - companies in lebanon beirut. Sezvo mabhota ari kuramba ari pasi pekutonga kwevanhu vari kure, varwi vane utachiona vanogara vachiwana misarudzo uye vanoramba vachichinja maitiro avo. Somugumisiro, vadzidzisi vebhodhoro vanogona kukwereta nyore nyore kuvhidhiri nevanoita mhirizhonga paIndaneti uye kugovana mabhoti avo muzvikamu kuti vaite nhamba yakawanda yebasa, izvo zvinorehwa kuvapa zvakawanda zvekuwana mari.
Zviito zvinowanzoonekwa kana zvikwaniso zvemabhodeni zvinotsanangurwa pasi apa naMichael Brown, we Semalt Mutungamiri Wekubudirira Kwevatendi:
Sezvaunogamuchira ma email akawanda zuva rega rega, mikana ndeyokuti email yako ID iri pasi pekurwiswa kwehacker. Iyo spam botnets yakakura muhukuru uye inoshandiswa kutumira mameseji e spam kusanganisira malware. Vanowanzotarisa nhamba kubva kubhizinesi bots. Semuenzaniso, botnet yeDauwairi inogona kutumira mabhiriyoni makumi manomwe mabhiriyoni zuva nezuva. Inowanzoshandiswa kuparadzira mavhesi uye bots uye inowedzera makombiyuta akawanda kune imwe nzvimbo yepasi..
2. DDoS kutambudzwa
Kurwiswa kweDDoS kunoshandisa huwandu hwakawanda hwemabhodetete uye kuwandisa zvakananga kunyorera mitambo kana mavhavhari ane zvikumbiro zvakananga. Vanopawo makombiyuta avo, 'uye zvinangwa zvavo zvikuru masangano makuru, mapato ezvematongerwe enyika, uye makambani anotumira kunze-kutumira. Vanowanzorega kugadziriswa kwekuwana mari.
3. Kukanganisa kwemari
Kuputsa kwezvemari kunosanganisira mabhota ayo akagadzirirwa kushambadzira kwemari kubva kumabhizimisi makuru. Vanobawo ruzivo rwekadhi rechikwereti uye PayPal passwords. Matambudziko emari, akadai seZeus botnet, anokonzerwa nekurwiswa kwakakura kunosanganisira mazana emadhora akabiwa kubva kumabhizimisi akawanda munguva pfupi.
Izvo zvidiki zviduku zvakakura zvinosanganisira mabhizimisi ekupedzisira uye zvinowanzokonzera makombiyuta chaiwo. Vanorwisa vanotumira mabhodhi kumasangano ayo ari nyore kupinda mukati uye kupinda mune mamwe majekiti mumutachiona une utachiona. Kuvhiringidzika kune ngozi sezvo vachirwisa masangano makuru uye vachibira dhepfumi, ruzivo, uye ruzivo rwevatengi.
Zvakachengeteka kutaura kuti mabhota anosikwa apo nyanzvi inotumira bots kubva kune yake / control yake system kana imwe seva pasina ruzivo rwemushandisi. Izvo zvipembenene zvinokonzera huwandu hwemichina pakarepo. Kana uchinge wazarura mafaira akaipa, mabhoti achadzoka zvakare kune botmaster achimuita kuti azive kuti chipikicha chekombiyuta chitsva chakagadzirira kurwiswa. Zvimwe zvakasiyana-siyana zvinoshandiswa zvinoshandiswa zve botnets nemabhodzi zvinoita kuti zvive zvakakodzera kwenguva refu.